Redmi Watch dia ambara amin'ny efijery miloko sy fahaleovan-tena mandritra ny herinandro | Androidsis
Redmi dia nanambara ny famantaranandro voalohany miaraka amina endrika am-pitandremana fatratra ary mitovy endrika amin'ny Apple Watch, manantena fa ho fidirana lehibe ho an'ny tsena samihafa. Izy io dia tonga taorian'ny fanekena tsara noraisiny tamin'ny Xiaomi Watch ary miaraka amin'ny fanampiny fanampiny.
Ny Redmi Watch dia milalao loko miloko raha vao jerenaAnisan'ireo asany io dia hanana interface maro azo ovaina isika ary, raha tsy ampy izany, fizakantena maharitra herinandro mahery amin'ny fampiasana mitohy. Ity smartwatch vaovao ity dia tonga taorian'ny fampisehoana ny Redmi Note 9, Redmi Note 9 5G ary Redmi Note 9 Pro 5G.
1 Redmi Watch, momba ny famantaranandro vaovao daholo
2 Fifandraisana sy fanampiny hafa
Redmi Watch, momba ny famantaranandro vaovao daholo
El vaovao Redmi Watch tonga miaraka amin'ny efijery 1,4-inch miaraka amin'ny vahaolana 320 x 320 teboka, hakitroka 323 dpi, famirapiratany mandeha ho azy ary ny vera dia 2.5D. Ny fikasihana amin'ny pulsations dia ho malefaka ihany, niasa tamim-pahagagana teo amboniny izy io ary iray amin'ny tanjaky ity finday maranitra ity.
Ny fizakantena amin'ny fampiasana maharitra dia eo amin'ny 7 andro, fa amin'ny fitsitsiana bateria dia mety hahatratra efa ho roa herinandro eo ho eo amin'ny maody fanatanjahantena. Milanja mihoatra ny 35 grama fotsiny izy, somary kely ihany ary ahitsy ny refy mba hifanaraka amin'ny felatanana tsirairay.
Redmi Watch dia manana endrika fiambenana 120 tsy mitovy, maody fanatanjahantena 7ao anatin'izany ny hazakazaka an-kalamanjana, ny tongotra an-tongotra, ny filomanosana, ny hetsika an-kalamanjana, ny bisikileta ary ny fomba maro samihafa Fanoherana ny rano 5 ATM, mandrefy ny tahan'ny tahan'ny fo, ny saturation ny oxygen oxygen ary ny fanaraha-maso ny torimaso.
Fifandraisana sy fanampiny hafa
Amin'ny lafiny fifandraisana, Redmi Watch dia manana Bluetooth 5.0 hifanaraka ary NFC, ny farany misy any Chine, na dia antenaina fa hanao izany tsy ho ela any Eropa ihany koa. Ny fiambenana dia mampiseho fampandrenesana, antso miditra, fampandrenesana hafatra, antsipirian'ny media sosialy ary fampiraisana fitaovana.
Izy io dia mifanaraka amin'ny fitaovana misy Android 5.0 na ny avo kokoa, ary koa ny iOS 10.0 na ny avo indrindra amin'ny rafitra fiasan'ny Apple. Ny tsara dia ny fotoana ialan'ny efijery sy ny fizakantenanao, satria maharitra maharitra herinandro ny bateria amin'ny fampiasana mahazatra miaraka amin'ny adiny adiny iray sy sasany dia ampy.
SCREEN LCD 1.4-inch (320 x 320 teboka) / 323 dpi / 2.5D Glass
AUTONOMY Andro 7
Sela Mpandray Hafanana Fiakarana haingana / tahan'ny fo / fahasamihafana amin'ny oxygen / ra / fanaraha-maso torimaso
Software Fijerena 120 / maody fanaovana fanatanjahan-tena 7
Tonga amin'ny loko mainty, manga mainty, volontany maivana ny Redmi Watch, maitso sy mavokely any Sina no vidiny teo amin'ny 299 yuan teo ho eo (38 euro amin'ny tahan'ny fifanakalozana). Ho mora kokoa noho ny Xiaomi Watch izy io, izay saika 55 euro ny vidiny tany Espana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Redmi Watch dia ambara miaraka amin'ny efijery miloko sy fahaleovan-tena mandritra ny herinandro
Ahoana ny fomba famoronana backup amin'ny sary sy sary ao amin'ny Facebook
Plune dia karazana Arkanoid mahazatra izay ampiasainao ny lohan'ny dragona hitokona